Home भिडियो डान्सबारको लुट – काठमाडौंका केही डान्सबारको नियतनै लुट्ने ! जुसको १३ हजार ( भिडियो )
काठमाडौंका केही डान्सबारहरुको नियतनै मान्छे लुट्ने मात्रै हुन्छ । काठमान्डौमा सयौको संख्यामा डान्स बारहरु छन्। काठमान्डू को कुना कुनामा रहेका डान्स बारको कुरा गरि साध्य छैन। यस अघि पनि डान्स बारहरुको बारेको भण्डाफोर भैसकेको हो यस्तै फेरि अर्को डान्स बारमा लुट्ने काम भएको छ। नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा खुलेका यस्ता डान्सबारले जुस खाएकै भरमा हजरौको बिल दिने र पैसा नतिरे बन्दक बनाउने गरेको हामीले नयाँ बसपार्क क्षेत्रका केही डान्सबारले मान्छे कसरी लुट्छन भन्ने स्टिङ गरेर सप्र–माण देखाएका थियौं ।
काठमाडौं नयाँ बसपार्क क्षेत्रका डान्सबारको अवस्था अझै उस्तै छ । विराटनगरका यी युवा आइतबार नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा खाने बस्ने होटलको खोजीमा थिए । तर बाटैमा एक व्यक्ति राम्रो होटल र खान बस्न भएको भन्दै उनीहरुलाई भित्र लगे । भित्र त सन् फ्लार अन्डरग्राउण्ड डान्सबार रहेछ । उनीहरु भित्र छिर्दा नछिर्दै जुस खुवाए र केही युवतीहरु छेउमा आएर बसे । र उनीहरुले नै आफै मगाएर मदिरा पिए । वाहरुलाई आशंका लागेपछि उनिहरु निस्किन खोजे । तर काउण्टरमा बसेका व्यक्तिले ९ हजारको बिल थमाए ।
केही बेर भनाभन परेपछि झन् बढाएर १३ हजारको बिल पु¥याए । र पैसा नदिए कुट्ने अवस्था आयो । उनीहरुले हामीलाई गुनासो गरेपछि पीडित युवाहरुसहित हाम्रो टिम मंगलबार दिउँसो नयाँ बसपार्क प्रहरी प्रभागमा जानकारी गरायौं । प्रहरीले पहिले साँझमा रेष्टुरेण्ट खुलेपछि एक्शन लिने बतायो । हामीले रेष्टुरेण्टको अनुगमन गर्दा यहाँ कुनै सुचना थिएन । तर एकाएक साँझमा भने रेष्टुरेण्ट मर्मतका लागि बन्द गरिएको सुचना टाँस भयो ।
पोखिन यी महिलाले रबि माथि आक्रोश ! बुझेर काम गर्न सुझाब ( भिडियो सहित )
रबि लामिछाने फुर्सद निकाल्दै पत्नी निकितासंग हिउ खेल्न पुगे नगरकोट ( भिडियो )